Munaasabad lagu xusay maalinta Bey’ada oo Muqdisho lagu qabtay-Sawirro – Radio Muqdisho
Munaasabadani oo lagu xusaayay maalinta Bii’ada oo ay ka soo qeyb galeen wasiiro katirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya iyo xubno ka socday Ururada Bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana soo qaban qaabiyay Xafiiska Ra’isul Wasaaraha ee u qaabilsan dhinaca bii’ada.
Inta ay munaasabada socotay ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay suugaan ka turjumeysaa ahmiyada ay leedahay ilaalinta bilicda deegaanka hidaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed sidoo kale waxaa munaasabada lagu soo bandhigay sawiro iyo muuqaala ka turjumaaya dhibaatada lagu hayo deegaanka.
Wasiir ku xigeenka wasaarada Qorsheenta iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Xukuumada Soomaaliya mudane Cabdulaahi Sheekh Cali “Qaloocow” iyo Wasiir ku xigeenka wasaarada Warfaafinta,Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya mudane Cabdulaahi Colaad Rooble oo muunasabada ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed ku booriyay in ay ilaaliyaan bilicda deegaanka.
“Deegaanka in lagu ciyaaro ma ahan deegaanka qiimo ayuu leeyahay adaa ku nool kuwa kaa dambeeya ayaa ku noolaanaya marka waxaan ku talinlahaay qashinka in meel ku haboon la geeyo“. Ayuu yiri wasiirka.
Wasiiru Dowlaha Bii’ada ee Xafiiska Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya mudane Burci Maxamed Xamza ayaa tilmaamay in dhalinyarada iyo haweenka ay dadka ku wacyigeliyaan ilaalinta bilicda deegaanka
Wasiirka Wasaarada Caafimadka Dr. Xaawa Maxamed Xasan iyo Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xaquuqal Aadanaha Marwo Sahra Maxamed Cali Samatar oo goobta ka hadlay waxey ugu baaqeen bulshada Soomaaliyeed in ay ka hortagaan baabi’inta deegaanka, iyo in laga fogaado nadaafad darida.
Guddoomiyeyaasha Baarlamaannada Soomaaliya Iyo Uganda Oo Kampala Ku Kulmay “SAWIRRO”